अधिवेशनलाई कसरी मुल्यांकन गर्नभयो?
संक्रमणकालको अवस्थामा रहेको नेपालमा कांग्रेसको अधिवेशनलाई लोकतन्त्रका लागि शुभ लक्षणका रूपमा हेरेको छु। विश्वका थोरै देशमा मात्र पार्टिभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ। नेपालमा यस्तो महशुस गर्ने अवशर पाए। जनतामा परिवर्तनको उत्साह भेटे। अधिवेशनले जनता चाँडो सम्विधान चाहन्छन भन्ने सन्देश दिएको छ।
भारत र नेपालका दलभित्रका लोकतान्त्रिक अभ्यास कसरी तुलना गर्नुहुन्छ?
भारतमा लोकतन्त्रको अभ्यास पुरानो छ। नेपालको इतिहासमा पनि जनताले लोकतन्त्रका लागि खुबै लडेका छन्। नेपाली जनता राणा र पञ्चायतसंग लडेर लोकतन्त्र ल्याएका हुन। पछि राजतन्त्रसंग समेत लडनु पर्‍यो। विद्रोहीहरु समेत आखिरमा लोकतन्त्रको छाता मुनि आएका छन्। विश्वमा विरलै यस्तो अवस्था देख्न पाइन्छ। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै सबै मिलेर अगाडि बढ्ने अवसर हो। मेरो बिचारमा यहा"को लोकतन्त्र भारत जस्तै सफलताको बाटोमा छ।
भारतको उत्तराखण्ड राज्यले केहि बर्षमा उल्लेख्य प्रगतिको कारण के हो?
उत्तराखण्डको भूगोल नेपाल जस्तै छ। सन २००० मा युपिलाई फुटाएर यो राज्य अस्तित्वमा आएको हो। छुट्टिए लगत्तै सरकारले राज्यका सम्पुर्ण स्रोत साधनको सहि उपयोग गर्ने योजना बनाएर काम गर्‍यो। मुख्यतया सडक ,शिक्षा ,कृषि, जलविद्युत र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा चार वर्षमै राज्यको मुहार फेरिन थालेको जनताले महशुस गर्न थाले। अहिले उत्तराखन्ड जलविद्युत प्रदेशका रूपमा समेत चिनिन थालेको छ।
महाकाली नदी आसपासका नेपाली जनताका लागि राज्यका केही योजना छन?
उत्तराखण्ड र नेपालको महाकाली क्षेत्रको नाता पुरानो हो। अहिले पनि यहा निर्वाधरूपमा सामाजिक सम्बन्ध जारी छ। यस क्षेत्रका जनतालाई दुई देशका बासिन्दा भएको महसुश हुँदैन। काली वारी हाम्रो भु-भागमा सडक, बिजुली, विद्यालय जस्ता सुविधा विस्तारै बढ्दै छन। नेपाल तिर त्यस्तै सुविधा नदेख्दा हामो मन कुँडिन्छ। सीमा क्षेत्रमा विकासका लागि लागि राज्यस्तर भन्दा राष्ट्रियस्तरमा नै दुईदेश बिच वार्ता गरेर अगाडी बढ्न आवश्यक छ।
सीमामा नेपालीहरू किन सताईन्छ?
मैले भने यो क्षेत्रमा जनताका आपसी सम्बन्ध छ। नेपाली सताउने नीति राज्य सरकारले लिएको हैन। बढ्दो उग्रबादले सुरक्षाको दृष्टिले सोधपुछ गर्दा र सरकारी कर्मचारीको अज्ञानताले यस्ता समस्या सीमामा देखिने गरेका छन। यी समस्या स्थानियस्तरमा बेला बेलामा हुने दुबै देशका सरकारी कर्मचारीको सीमा बैठकबाट समाधान गर्नु पर्छ।
धर्म निरपेक्ष नेपालप्रति तपाईको पार्टीको दृष्टिकोण के हो?
समयको माग अनुसार नेपाल धर्म निरपेक्ष भएको छ। तर यो हिन्दु बहुल देश हो। धर्म निरपेक्ष हुँदैमा हिन्दुत्व समाप्त हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर , धर्ममा नाममा विकृति भित्रिन्छन र अनेक प्रलोभन दिइन्छ भने यसबारे नेपाल सरकारले सोच्नैपर्छ।
तपाईको पार्टीको नेपालबारे ताजा धारणा के हो?
सीमामा सर्व साधारणबीच सौहार्द्ध पुर्ण सम्बन्ध छ। हामी भौगोलीक र सांस्कृतिक दृष्टिले एक छ। बेलाबेला नेपालमा भारत बिरोधी भावना उक्साउने काम हुने गरेको मैले सुनेको छु। राजनैतिक दलले आफ्नो स्वार्थका लागि यस्तो गर्ने गरेका छन। सन १९५०को सन्धिको कुरा पनि हुने गरेको छ। सन्धि पुनरावलोकन जस्तो कुरालाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिएर काम गरे भने समाधान नहुने कुरै होईन। समस्या समाधान गर्नुको साटो यसलाई राजनैतिक हतियार बनाईन्छ। नेपाल जस्तो जल सम्पदाको धनी मुलुकमा काम गर्ने हो भने यसको भविश्य स्वर्णिम छ। भारतिय जनता पार्टी समेत नेपालमा जनादेशको कदर र स्थिर राजनिति चाहन्छ। पीछडिएका वर्गको उत्थान गरेर नेपाल आफ्नै खुट्टामा उभिएको दिन यो देशको उचाई विश्वमा सगरमाथा जस्तै अग्लो हुनेछ।